Dopamine (ဒိုပါမင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Dopamine (ဒိုပါမင်း)
Dopamine (ဒိုပါမင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Dopamine (ဒိုပါမင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Dopamine (ဒိုပါမင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Dopamine အား နှလုံး၏ညှစ်အား တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့် ကျောက်ကပ်များဆီသို့ သွေးစီးဆင်းမှုကောင်းစေရန် အသုံးပြုပါသည်။ Dopamine ထိုးဆေး (Intropin) ကို သွေးလန့်ချိန်တွင် ဖြစ်တတ်သည့် သွေးပေါင်ကျခြင်းအား ကုသရန်သုံးသည်။ သွေးလန့်ခြင်းသည် နှလုံးဖောက်ခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ခွဲစိတ်ခြင်း၊ နှလုံးမကောင်းခြင်းနှင့် တခြားသောပြင်းထန်သည့် ရောဂါများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်။ ဤစာတမ်းတွင်မဖော်ပြထားသည့် တခြားအခြေအနေများတွင်လဲ Dopamine ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသေးသည်။
Dopamine (ဒိုပါမင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Dopamine ထိုးဆေးအား အကြောဆေးအနေနှင့်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းထိုးဆေးအား ဆေးရုံ ဆေးခန်းများတွင်သာ ထိုးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူအား Dopamine ထို့သည့်အခါ အကြောဆေးသွင်းပိုက်နေရာမှာ ပူလောင်ခြင်း၊ နာခြင်း သို့မဟုတ် ဖောင်းလာခြင်းများရှိလျှင် ပြောပါ။
သင်၏အသက်ရှူနှုန်း၊ သွေးပေါင်၊ အောက်စီဂျင်လယ်ဗယ်၊ ကျောက်ကပ်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် တခြားသော အဓိကလက္ခဏာများအား Dopamine ထိုးနေစဉ် သေချာစစ်ဆေးစောင့်ကြည့်နေမည်ဖြစ်သည်။ သင့်၏ကျန်မာရေးအခြေအနေကို Dopamine မှကောင်းမွန်စေပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းဖို့ သေချာစေရန်အတွက် သင်၏ဆဲလ်များနှင့် ကျောက်ကပ်လုပ်ငန်းစဉ်များကို မကြာခဏ စစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ သွေးစစ် ဆီးစစ်လုပ်ရန် ပြန်ချိန်းသည့်အချိန်သွားဖို့ရာ လုံးဝမမေ့ပါနှင့်။
Dopamine (ဒိုပါမင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Dopamine ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုများမဖြစ်စေရန် Dopamine ကို ရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးတွေမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Dopamine ဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသောပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသော သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ဝေးရာတွင်ထားပါ။
Dopamine အား အိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချတာမျိုးအား မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကိုမလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့်အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ရာ အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Dopamineအားရေခဲသေတ္တာထဲ၌ သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်သောကြောင့် အေးခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Dopamine (ဒိုပါမင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Dopamine ကိုမသုံးခင် ဖြစ်နိုင်ပါက သင်၌အောက်ပါတို့ရှိနေလျှင် ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
• Pheochromocytoma (အက်ဒရီနယ်ဂလင်းတွင် အကျိတ်ဖြစ်ခြင်း) ရောဂါရှိလျှင်
• MAO inhibitor များဖြစ်သည့် furazolidone (furoxone), isocarboxazid (marplan), phenelzine (nardil), rasagiline (azilect), selegiline (eldepryl, emsam, zelapar), or tranylcypromine (parnate) တို့အား လွန်ခဲ့သည့် ၂၁ ရက်အတွင်း သုံးထားလျှင် ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Dopamine (ဒိုပါမင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Dopamine (ဒိုပါမင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Dopamine ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအား မှတ်တမ်းတင်ပြုစုထားတာမျိုး သိပ်မရှိပါ။ သို့သော် မူမမှန်နှလုံးခုန်ခြင်းမျိုး၊ ပျို့ခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်းနှင့် အသက်ရှူမဝခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ သင့်၌ အလက်ဂျစ်လက္ခဏာများဖြစ်သည့် အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ မျက်နှာ နှုတ်ခမ်း လျှာနှင့် လည်ချောင်းများ ဖူးယောင်ခြင်း စသည်တို့ရှိလာပါက အရေးပေါ်ကုသမှု ခံယူရပါမည်။
အောက်ပါပြင်းထန်သည့် အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်လာပါက သင်၏ဆရာဝန်နှင့် ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။
• နှလုံးခုန်နှုန်း မြန်ခြင်း နှေးခြင်း တစ်အားခုန်ခြင်း
• ဆီးသွာလျှင် နာခြင်း၊ ခက်ခြင်း၊ ဆီးတွင်သွေးပါခြင်း
• အားနည်းခြင်း၊ ကယောင်ကတမ်းဖြစ်ခြင်း၊ ခြေထောက်နှင့် ခြေကျင်းဝတ်တွင် ဖူးယောင်ခြင်း၊ ပုံမှန်ထက် ဆီးသွားနည်းခြင်း သို့ ဆီးလုံးဝမသွားခြင်း၊
• လဲလျောင်းနေလျှင်တောင်မှ မူးမေ့တော့မလို ခံစားရခြင်း
• အပ်စိုက်သည့်နေရာမှ ပူခြင်း၊ နာခြင်း၊ ဖောင်းလာခြင်း
• သင်၏လက်နှင့်ခြေများတွင် အေးစက်လာခြင်း၊ ထုံခြင်း၊ အပြာရောင်သန်းလာခြင်း
• လက်နှင့်ခြေများ မဲနက်လာခြင်း သို့ အရေပြားပြောင်းလဲခြင်း
မပြင်းထန်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
• ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ စိုရိမ်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ ကြက်သီးထခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Dopamine (ဒိုပါမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Dopamineသည်သင်အခုသောက်သုံးနေသည့်တခြားသော ဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန်သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံး၏စာရင်းကိုပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်သည့်အခါဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနှင့်။ အထူးသဖြင့်အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။
• Epinephrine (epipen, Adrenaclick, Twinject, and others)
• Midodrine (proamatine)
• စိတ်ကျရောဂါကုဆေး ဥပမာ- amitriptyline (Elavil, Vanatrip, Limbitrol), doxepin (Sinequan, Silenor), nortriptyline (Pamelor) နဲ့ အခြား
• A beta blocker ဥပမာ- atenolol (Tenormin, Tenoretic), carvedilol (Coreg), labetalol (Normodyne, Trandate), metoprolol (Dutoprol, Lopressor, Toprol), nadolol (Corgard), propranolol (Inderal, innopran), sotalol (Betapace) နဲ့အခြား
• antihistamine (သို့) နှာပွင့်ဆေးပါသော အအေးမိ၊ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး
• Ergot ဥပမာ- ergotamine (Ergomar, Cafergot, Migergot), dihydroergotamine (D.H.E. 45, Migranal), ergonovine (Ergotrate), methylergonovine (Methergine)
• phenothiazine ဥပမာ- chlorpromazine (Thorazine), fluphenazine (Permitil, Prolixin), perphenazine (Trilafon), prochlorperazine (Compazine, Compro), promethazine (Pentazine, Phenergan, Anergan, Antinaus), thioridazine (Mellaril), trifluoperazine (Stelazine
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Dopamine (ဒိုပါမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Dopamineက အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Dopamine (ဒိုပါမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Dopamineသည်သင်၏နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီး၏။ အထူးသဖြင့် နှလုံးသွေးကြောရောဂါ၊ Raynaud’s syndrome ကဲ့သို့ သွေးလှည့်ပတ်မှုနှင့်ဆိုင်သောရောဂါများ၊ သွေးခဲဖူးလျှင်၊ ဆီးချို၊ နှင်းကိုက်နာ၊ Burgers ရောဂါ (ခြေထိပ်လက်ထိပ်ပုပ်သောသွေးကြောရောဂါ)၊ ပန်းနာရင်ကြပ်နှင့် ဆာလဖာအလက်ဂျီရှိလျှင်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Dopamine (ဒိုပါမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ဆီးနည်းခြင်း (ဆီးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိ) အတွက် လူကြီးသုံးရန် ပုံမှန်ဆေးပမာဏ
ကနဦးဆေးပမာဏ ။ 1 –5mcg/kg/min တောက်လျှောက် အကြောဆေးသွင်းခြင်း၊ လိုချင်သော တုန့်ပြန်မှုရအောင် ဆေးပမာဏကိုညှိသည်။ 50 mcg/kg/min ထက်များသော ပမာဏကို အရေးပေါ် အခြေအနေမျိုးတွင် သုံးသည်။
ကနဦးပမာဏ ။ 1 –5mcg/kg/min တောက်လျှောက် အကြောဆေးသွင်းခြင်း။ လိုချင်သော တုန့်ပြန်မှုရအောင် ဆေးပမာဏကို ညှိသည်။ 50 mcg/kg/min ထက်များသော ပမာဏကို အရေးပေါ် အခြေအနေမျိုးတွင် သုံးသည်။
ကလေးတွေအတွက် Dopamine (ဒိုပါမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ဆီးနည်းခြင်း (ဆီးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိ) အတွက် ကလေးသုံးရန် ပမာဏ
တစ်လအောက် ။ 1 – 20 mcg/kg/min တောက်လျှောက် အကြောဆေးသွင်းခြင်း။ လိုချင်သော တုန့်ပြန်မှုရအောင် ဆေးပမာဏကို ညှိသည်။
တစ်လနှင့်အထက် ။ 1 to 20 mcg/kg/min တောက်လျှောက် အကြောဆေးသွင်းခြင်း။ လိုချင်သော တုန့်ပြန်မှုရအောင် ဆေးပမာဏကို ညှိသည်။ အများဆုံး 50 mcg/kg/min ။
dopamine ၏ အာနိသင်သည် ဆေးပမာဏပေါ်တွင် မူတည်၏။
နည်းသောပမာဏ ။ 1-5 mcg/kg/minute ကျောက်ကပ်တွင်သွေးစီးမှုကောင်းစေပြီး ဆီးရွှင်စေသည်။
ပုံမှန်ပမာဏ ။5to 15 mcg/kg/minuteကျောက်ကပ်သွေးစီးဆင်းမှုကောင်းခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်းကောင်းခြင်း၊ နှလုံးညှစ်အားကောင်းခြင်း၊ နှလုံးမှညှစ်သောသွေးပမာဏများခြင်းနှင့် သွေးပေါင်တက်ခြင်း
များသောပမာဏ။ 15 mcg/kg/minute ထက်ပိုသောပမာဏ ။ alpha-adrenergic အာနိသင်က ပိုပြီးအလုပ်ဖြစ်စေသည်။ သွေးကြောများကိုကျဉ်းစေပြီး သွေးပေါင်တက်စေ၏။
တစ်လနှင့်အထက်။ 1 – 20 mcg/kg/min တောက်လျှောက် အကြောဆေးသွင်းခြင်း။ လိုချင်သော တုန့်ပြန်မှုရအောင် ဆေးပမာဏကို ညှိသည်။ အများဆုံးပမာဏ 50 mcg/kg/min ။
dopamine အာနိသင်သည် ဆေးပမာဏပေါ်တွင် မူတည်၏။
နည်းသောပမာဏ။ 1 to5mcg/kg/minute ကျောက်ကပ်တွင်သွေးစီးမှုကောင်းစေပြီး ဆီးရွှင်စေသည်။
ပုံမှန်ပမာဏ။5to 15 mcg/kg/minute ကျောက်ကပ်သွေးစီးဆင်းမှုကောင်းခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်းကောင်းခြင်း၊ နှလုံးညှစ်အားကောင်းခြင်း၊ နှလုံးမှညှစ်သောသွေးပမာဏများခြင်းနှင့် သွေးပေါင်တက်ခြင်း
များသောပမာဏ။ 15 mcg/kg/minute များသောပမာဏ။ alpha-adrenergic အာနိသင်က ပိုပြီးအလုပ်ဖြစ်စေသည်။ သွေးကြောများကိုကျဉ်းစေပြီး သွေးပေါင်တက်စေ၏။
Dopamine (ဒိုပါမင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Dopamine ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
• ဖျော်ရည်၊ ထိုးဆေးများအား ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက်ပုံစံဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
Generic ။ 0.8 mg/mL (250 mL ၊ 500 mL) ၊ 1.6 mg/mL (250 mL ၊ 500 mL) ၊ 3.2 mg/mL (250 mL) ၊ 40 mg/mL (5 mL ၊ 10 mL) ၊ 80 mg/mL (5 mL) ၊ 160 mg/mL (5 mL).
Dopamineကိုသုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့်နီးကပ်နေပြီဆိုပါကလွတ်သွားသောအကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအားနှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။
Dopamine. https://www.drugs.com/dopamine.html. 22/06/2016
Dopamine Intravenous. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-6226/dopamine-intravenous/details. 22/06/2016